स्वागत glittering जंगल को मा सुनको गहने को पूर्ण गर्न सुनको जंगल मुक्त spins कुनै जम्मा क्यासिनो.यहाँ हरेक प्रतीक भारतीय राजाहरूको उमेर-पुरानो साम्राज्य को सम्झाउने. यो तिनीहरूले तरवार जस्तै सुनको विशाल सम्पत्तिहरू थियो कि एक चिरपरिचित तथ्य छ, headpieces, Emerald छल्ले, बक्से, पर्खाल आदि मा सुन नक्काशियों. पहिले नै उत्साहित? तपाईं हुनुपर्छ! जस्तै पनि आफ्नो बाटो मा धन ध्वनि!
सुनको जंगल विकासकर्ता बारे
Igt वा अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी अझै फेरि यसको mettle साबित भएको छ सुनको जंगल मुक्त spins कुनै जम्मा क्यासिनो. वर्ष 2006 GTech निगम को नाम अन्तर्गत अमेरिका मा igt गरेको सञ्चालनका शुरुवात चिन्ह लगाइएको. यो अमेरिका आधारित कम्पनी हालै यसको नाम प्राप्त 2015 when Gtech Corporation acquired IGT and took on its name for carrying on all its future operations Industry.
मा सुनको जंगल मुक्त spins कुनै जम्मा क्यासिनो, यो सट्टेबाजी £ 1,500 गर्न 50p एक स्पिन बीच दायरा र साथ खेलिन्छ5रील. त्यहाँ छन् 50 संयोजन विजेता लागि लक्ष्य गर्न paylines. को 'धन' प्रतीक jewel पत्थर समावेश, कलाकृतिहरु, jewellery boxes, र हात्ती मूर्तिहरू. शीर्ष बोनस प्रतीक बाघ जङ्गली र स्क्याटर बाहेक सबै प्रतीक प्रतिस्थापन छ. भीषण2प्रतीक उच्च बाघ बडा जीत जान्छ जब यो पाँच रील प्रत्येक देखिने. अधिकतम पुरस्कार अप छ 40 पटक आफ्नो खम्बा. सबै, तपाईं स्थान छ के गर्न आवश्यक5को रील प्रत्येक मा टाइगर्स.
सुनको मन्दिर गेट स्क्याटर प्रतीक तपाईं राउन्ड मुक्त spins साथ दिन्छ.
त्यहाँ छन्2को को मुख्य विशेषताहरु मुक्त spins कुनै जम्मा क्यासिनो खेल: यो जंगली Stays,4नाटकहरु सुविधा सङ्कलन गर्न आवश्यक4मूर्ति प्रतिमा प्रतीक. यसो हुँदा, को रील को एक लक जंगली रील बन्न. यसको लागि जस्तो रहन्छ4थप spins. फ्री Spins बोनस सुविधा कम से कम प्राप्त गरेर रूपबाट 3-5 स्क्याटर प्रतीक. यस फ्री मा बोनस spins, के तपाईं बनाउन चाहनुहुन्छ मुक्त spins संख्या चयन र बन्द जंगली रील गर्न रील को एक विशेष नम्बर बारी विकल्प दिइएको.
3 छरिन्छ: 15 रील निःशुल्क spins3भइरहेको एक लक
6 रील निःशुल्क spins2र4बन्द भइरहेको
2 रील निःशुल्क spins 1,3र5बन्द भइरहेको
4 छरिन्छ: 30 रील निःशुल्क spins3भइरहेको एक लक
12 रील निःशुल्क spins2र4बन्द भइरहेको
4 रील निःशुल्क spins 1,3र5बन्द भइरहेको
5 छरिन्छ: 75 रील निःशुल्क spins3भइरहेको एक लक
30 रील निःशुल्क spins2र4बन्द भइरहेको
12 रील निःशुल्क spins 1,3र5बन्द भइरहेको
हुँदा मध्यम विचरण खेल कम, को मुक्त spins कुनै जम्मा क्यासिनो विशेष गरी बस एक क्यासिनो स्लट संग वरिपरि laze गर्न चाहन्छु र सजिलो समय भएका जोखिम-averse खेलाडीहरू द्वारा उपयुक्त छ.